BOOSAASO: Madaxweynaha Dawlada Puntland oo la filaayo inuu dhawaan gaaro Magaalada Galkacayo ee xarunta Gobalka Mudug.
January 12, 2013 8:41 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Boosaaso: (pp)- Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo maalmihii u danbeeyey ku sugnaa Magaalada Boosaaso ee caasimada Dhaqaalaha Puntland Ayaa la filayaa inuu dhawaan u ambabaxo Magaalada Galkacayo ee
Xarunta Gobalka Mudug.
Madaxweynaha Puntland oo lagu wado inuu booqdo Gaalkacyo
Warar aan ka helay dad ka ag dhow Madaxweynaha Dawlada Puntland ayaa sheegaya inuu Madaxweynuhu isku diyaarinaayo socdaal uu ugu Ambabaxo deegaano katirsan Gobalka Mudug oo ay kamid tahay Magaalada Galkacayo ee Xarunta Gobalka Mudug.
Madaxweynaha ayaa intuusan tagin Magaalada Galkacayo waxaa uu sii mari doonaa Magaalada Qardho ee caasimada Gobalka Karkaar isagoo maalmo sii joogi doona Caasimada Dawlada Puntland ee Garoowe, Madaxweyne Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa la filaayaa inuu Magaalada Galkacayo kulamo kula qaadan doono qaybaha kala duwan ee Bulshada Gobalka Mudug isagoo Madaxweynuhu u kuur geli doona Mar xaladaha ka jira Gobalka iyo Baahiyada dadweynaha,Sidoo kale Madaxweynuhu wuxuu kulan la qaadan doonaa Maamulka Gobalka Mudug iyo Hay’adaha Amaanka Puntland ee Gobalkaasi,
Madaxweynaha Dawlada Puntland ayaa waayadii ugu danbaysya socdaalo ku maraayey qaar kamid ah Gobalada Puntland sida Gobalada Nugaal,Karkaar iyo Bari wuxuuna Madaxweynuhu kulamo kula qaatay deegaanadii u socdaalka ku tagey duqayda deegaanadaasi iyo weliba Maamul hosaadka ka jira deegaanada uu booqday wuxuuna Madaxweynuhu u kuur gaalaayey mar xaladaha ka jira deegaanada Puntland wuxuuna dadweynaha ugu baaqaayey in laga wada shaqeeyo nabad galyada iyo wadajirka Puntland loona diyaar garoobo hanaanka xisbiyada badan iyo Doorashooyinka Xorta ah.
Madaxweynaha ayaa tan iyo bishii ugu danbaysay ku sugnaa Magaalada Boosaaso ee Caasimada dhaqaalaha Dawlada Puntland wuxuuna Madaxweynuhu kulamo xiriir ah lalahaa qaybaha kala duwan ee bulshada Gobalka Bari tan iyo intii uu ku sugnaa Magaalada Boosaaso.
Shalay ayey ahayd Markii ay Magaalada Gaalkacayo ee xarrunta Gobalka Mudug ay gaareen illaa 5-wasiir oo katirsan Dawlada Puntland oo u muuqday inay usii gogol xaaraayeen qabanqaabada soo dhawaynta Madaxweyne Dr C/raxmaan Maxamuud Faroole.
Puntlandpost, Boosaaso, Soomaaliya